Afisy tsy eny amin’ny takelaka : Manome “Ultimatum” ny Ceni -
AccueilSongandinaAfisy tsy eny amin’ny takelaka : Manome “Ultimatum” ny Ceni
Afisy tsy eny amin’ny takelaka : Manome “Ultimatum” ny Ceni
Manoloana ny tsy fanarahan-dalàna misy amin’ izao fotoana, dia nilaza ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana, fa hampihatra ny lalàna izy ireo raha toa misy amin’ ireo kandidà, minia tsy manaraka ny fepetra natokana ho amin’ ny fifidianana. Indrindra ho an’ ireo kandidà izay mametraka afisy eny amin’ ny takelaka tsy natokana ho amin’ izany, dia 24 ora no nomen’izy ireo ny kandidà hanalana ireo afisy ireo. Ny zava-misy dia toa lasa biby fampitahorana ity “ultimatum” ity, raha ity fifidianana filoham-pirenena ity no jerena. Vao haingana izao ny firaisan’ny kandidà no nanome “ultimatum” ny Ceni, ny amin’ ny tokony hanokafana ny lisi-pifidianana. Ny fanontaniana mipetraka mantsy dia ny hoe, tsy efa misy ve ny lalàna mipetraka sy arahina. Ka izay mandika izany dia hiharan’ny sazy avy hatrany, ary tsy mila fe-potoana sy fampitandremana intsony. Efa hatramin’ny fotoanan’ny fampielezan-kevitra mantsy no nisy tsy fanarahan-dalàna , saingy tsy nisy mihitsy fepetra noraisina. Ny lalàna rahateo izay azo lazaina fa mandringa, ary tsy manome fahefana sy andraikitra ho amin’ izay tokony hanasazy. Hany ka ilaozan’ny kandidà manao izay tiany atao, satria fantany tsara fa tsy mipetraka mazava ny sazy.
Mikasika io fametrahana afisy io, dia nanamafy ny lalàna misy ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana omaly, mikasika ny tsy tokony hametrahana afisy eny amin’ ny toerana tsy natokana ho amin’ izany. Araka izany dia nanome 24 ora ny Ceni ahafahan’ireo kandidà manala ireo afisy tsy mipetraka amin’ny toerana voatokana ho amin’ izany. Mazava tokoa mantsy ny voalazan’ny lalàna fehizoro, mifehy ny fifidianana sy ny fitsapan-kevi-bahoaka 2018-008 , ao amin’ ny andininy faha-104 fa “voarara ny mametaka afisy fampielezan-kevitra amin’ny toerana tsy voatokana ho amin’izany”. Midika izany fa ny takelaka voatokana izay tokony ho hita isam-pokontany ihany no azo hametahana ireny afisy ireny, ary ankoatra izay dia raran’ny lalàna. Mba hampazava io toerana tsy azo hametrahana afisy io, dia manazava ny andininy faha-13 anatin’ny didy fampiharana ny laharana 2018-644 fa, “ voarara tanteraka ny fametrahana afisy amin’ireto toerana voalaza ireto, fefy na rindrin’ny tranom-panjakana, tranom-pivavahana, na ihany koa toerana hitehirizana ny kolontsaina, amin’ ireo tsangambato sy ireo toerana manan-tantara, siantifika, ary eny amin’ ny toerana natokana hanaovana dokam-barotra.
Mitohy hatrany ny asa fampandrosoana ataon’ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery. Omaly, dia fotodrafitrasa fototra dimy sosona indray no natolony ny vahoakan’Avaradrano. Isan’izany ny ivon-toeram-panofanana ho an’ny vehivavy ao Antsofinondry, ny biraon’ny kaomina vaovao ao Anosy Avaratra, ...Tohiny